Isinqumo sivuna uRamaphosa | Isolezwe
Isinqumo sivuna uRamaphosa
Izindaba / 13 September 2017, 10:25am / MHLENGI SHANGASE
IPhini likaMengameli uMnuz Cyril Ramaphosa abahlaziyi abathi isinqumo sokuchithwa kobuholi be-ANC eKZN sizovuna yena. Isithombe: INLSA
SIQINISE umkhankaso wePhini likaMengameli wezwe nele-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esichithe ubuholi obakhethwa engqungqutheleni yango-2015 sathi yayingekho emthethweni.
Lesi sinqumo sibukeka sigqeme udume lwengozi umkhankaso kaDkt Nkosazana Dlamini Zuma obebonakala esekwa kakhulu yisigungu sesifundazwe esichithwe yinkantolo.
Lokhu kuvezwe abahlaziyi bezepolitiki abathi uma abazwelana noMnuz Senzo Mchunu, owahlulwa nguMnuz Sihle Zikalala kuleyo ngqungquthela bengena emandleni bazohambisa amalungu azozwelana noRamaphosa ngoDisemba eNasrec, eGoli.
AMALUNGU e-ANC ahambisana noMnuz Senzo Mchunu abemisa * -17 ekhombisa ukuthi ahambisana nePhini likaMengameli we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa
Umhlaziyi wezepolitiki uSolwazi Bheki Mngomezulu uthe lesi sinqumo sinciphisa amathuba kaDkt Dlamini Zuma okuba ngumengameli.
“I-KZN isifundazwe esikhulu ngokwezibalo. Njengoba kuphume lesi sinqumo kusho ukuthi izithunywa eziningi zalapha esifundazweni zizoya engqungqutheleni kaDisemba zithwele ngeqoma uRamaphosa,” kusho uMngomezulu.
Omunye umhlaziyi wezepolitiki uMnuz Thabani Khumalo uthe iKZN ihlukene phakathi kakhulu njengoba bekwaziwa indaba kaDkt Dlamini Zuma noRamaphosa, muva nje sekukhona negama likaMgcinimafa-jikelele wenhlangano uDkt Zweli Mkhize.
UKhumalo uthe wuhlangothi lukaRamaphosa oluzuzile ngalesi sinqumo ngoba abantu bakhe sebezokwazi ukukhankasa ngokukhululeka bakwazi ukufaka umoya nakwamanye amalungu abenomunye umbono.
UKhumalo uthe isigungu esiphezulu se-ANC isona esidale ukuthi kuze kube naleli cala ngokuhluleka ukulawula inhlangano.
Uthe uma leli cala liqhubeka lokho kuzoqhuba izinkinga embuthweni.
UKhumalo uthe ubuholi obuphezulu be-ANC kumele busheshe bungenele ngoba uma bungangeneleli kuze kube khona abadlulisa isinqumo phambili kungenzeka kuphindeke esango-2012 lapho iFree State yagcina isiya engqungqutheleni njengezibukeli.
“Uhlelo lokulungisela ingqungquthela ludinga isikhathi kanti isikhathi sesihambile, yikho kumele kungenelelwe ukuze kugwemeke ukuthi iKZN igcine iya engqungqutheleni njengezibukeli ngenxa yokungaxazululwa kwalo mdonsiswano ngokushesha.”
UNobhala-jikelele we-ANC, uMnuz Gwede Mantashe, uthe wonke amalungu e-ANC avela KwaZulu-Natal azoya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi bale nhlangano engoDisemba eGoli kungakhathaleki ukuthi akuluphi uhlangothi.